क्रिसमस गर्ल प्यारा लोली १145 सेमी एन्टिटी सेक्स डल डार्लेन मोरिस
टीपीई सेक्स डल्स,फ्ल्याट चेस्टेड यौन पुत्री,बी कप सेक्स पुतली
12 सेव% $ 2,073.47 $ 1,836.00
डार्लिनको ठूलो भूक छ र धेरै लोभी छ। उनको मन पर्ने कुरा खानु हो। मनपर्ने खानाहरू "जलाइएको मासु" र "sashimi" र "स्ट्रबेरी बफी" लाई पनि मनपर्दछ। जब उनी सोच्छि वा बोल्छिन्, उनी सधै स्वेच्छाले खानासँग सम्बन्धित शब्दहरुमा धकेल्छिन्।
यदि तपाईं जहिले पनि एक मिठाई, आज्ञाकारी केटी तपाईंको छोरी बन्न चाहानुहुन्छ भने, त्यो राम्रो विकल्प हो। कुनै पनि पुरुष उनको सुन्दर अनुहार र मोहक स्टाइल मनपर्दछ। प्रायः, एकाकीपनले तपाईंलाई व्यक्तिबाट टाढा राख्दछ, र जीवन आकारको सेक्सन गुड़ियाले तपाईंलाई माया र सहिष्णु महसुस गर्न मद्दत गर्दछ।
"म सोध्न चाहन्छु, के तपाईको परिवारमा क्रिसमसको रूख छ, सान्ता क्लाउज तपाईको घर फर्कने छ? यदि उत्तर हो भने, म तपाईको घरमा जान पाउँदा खुसी छु," डार्लिंगले भने।
उनी धेरै भोली केटी हुन्। अब उनी अझै विकास गर्दैछिन। उनी सेक्स बुझ्दिनन्, तर उनी यसमा धेरै उत्सुक छिन्। उनको सेक्सको केवल समझ टेलिभिजन र इन्टरनेट मार्फत हो। यो चिसो क्रिसमस डार्लेन मोरिसको १ th औं जन्मदिन हो। उनी अर्को जन्मदिन चाहिनन्। उनी सँधै न्यानो खोजीमा छिन् जुन तपाईंले घर ल्याउनुहुन्छ। उनलाई हेरचाह र बढ्नको लागि ठाउँ दिनुहोस्। यो संसार तपाईं दुई मध्येको हो।
उनी एक वास्तविक पुतली हुन्। लामो खैरो रोल र शुद्ध उज्ज्वल ठूला आँखा। यो क्रिसमस उनको १ th औं जन्मदिन हो। यो १ cute19 सेन्टीमिटर उचाई, cm० सेन्टीमिटरको बस्ट, 145१ सेन्टीमिटर कम्मरको घेरा र h 80 सेन्टीमिटरको हिप साइजको प्यारो सेक्सल पुतली हो। उनको छाला TPE सामग्री बाट बनेको छ, तपाईंलाई सबैभन्दा यथार्थपरक स्पर्श अनुभव गर्न अनुमति दिदै। उसलाई घर लैजानुहोस्, तपाईं पछुताउनु पर्दैन।
१ * पुतली
१ * विग
१ * तल्लो शरीर तताउने डण्ड
१ * योनि धुने
१ कपडाको सेट
१ * कम्बल
१ * पन्जा
1 * निर्देशन पुस्तिका
उचाई Inches 57 इन्च (१145१ सेमी)
तौल ,,63० एलबीएस (२,१28.7० किलो)
बस्ट ： Inches 31 इन्च (१80१ सेमी)
कम्मर Inches 20 इन्च (१51१ सेमी)
प्याकेजिङ्ग साइज: 55.2*17*11.1 inches（140*43*28cm）
हाम्रो प्रतिबद्धता: * सबै सेक्स डल्स उत्पादनहरू नि: शुल्क पठाइन्छन्। त्यहाँ कुनै लुकाइएको शुल्क छैन। * सेक्सन गुड़ाहरू भण्डारण र ढुवानीको लागि विशेष बक्स। अरूले यसलाई बाहिरीबाट गुँडको रूपमा चिन्न सक्दैनन - तपाईंको गोपनीयता सुरक्षित गर्दछ। * हाम्रो वास्तविक पुतलीहरू सुरक्षित र गैर-विषाक्त मेडिकल सिलिकॉनबाट बनेका छन् (...
अकिरायर - पाइपर १C० सेमी जी कप ईवो स्केलेटन चल आईबल प्लेटिनू ...
PIPER प्लेटिनम सिलिकॉन सेक्स गुड़िया: १. नि: शुल्क हाइपर-यथार्थवादी श्रृंगार; २. ईभीओ कंकालको निःशुल्क अपग्रेड; Free. निःशुल्क अपग्रेड चल आईबल, टिकाऊ मेकअप; J. जेली स्तनहरूको निःशुल्क अपग्रेड (थप नरम र आरामदायी महसुस गर्नुहोस्); वजन कम गर्न फोम लाइनर भरिने; Over. त्यहाँ ओभरहेड फांसी छ (निःशुल्क हुक); ... ...
वेंडी - १165 सीएम डी कप WM NO.153 हेड रोल प्लेइ Skin प्रकृति छाला TPE ...